ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မအူပင် NLD အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ (ရုပ်သံ)
မအူပင် NLD အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ (ရုပ်သံ)
NLD သွေးစည်းလို့ နိုင်ငံအရေးအရင်မတွေး
ပါတီတွင်း အာဏာရဖို့ ယုံကြည်မှုတွေခ၀ါချလို့
ပါတီကိုအရောင်ဆိုး အမှောင်ကိုတိုးဖို့ ကြိုးစားကျပြီ ဒီဟာကို မဲမှရလို့ ဒါတော့ဖြင့်ဖြူချင်ပြန်
အားနဲသူ ကယ်ပါယူပါ နင်းပြားဘ၀နဲ့
အမေ့ကိုသတယ် ဒီအသံတွေ ဘယ်သောအခါမှ
ဒီအသံတွေ ဘယ်သောအခါမှ အပျော်တွေထဲ ပျောက်ပျက်သွားမလဲ
မြင်တာကို ပြောရရင်တော့ ခရိုနီတွေရှေ့ကိုရောက် မျိုးပျောက်မဲ့ အရေး ရင်တလေးလေး လေးလေး...
ဒါတောင် အာဏာ မရသေးဘူးနော်-အာဏာရလျှင် ဒိထက် ပိုကွဲမယ်-မယုံလျှင် စောင့်ကြည့်ပါ-
အာဏာနဲ့ ကုလားထိုင်တောင်မရသေးဘူး စပြီ
မြို့ အတွက်ဘာတွေ လုပ်ပေးပြီးပြီလဲ?
ခင်ဗျားအချင်းချင်းအဲဒီလိုဖြစ်နေ ၂၀၁၅ မှာဘယ်လိုစခန်းသွားမလဲ။
သနားစရာအကောင်းဆုံးက အသုံးချခံ နိုင်ငံဝန်ထမ်းနဲ့ ရိုးသားတဲ့မြန်မာသွေး
မအူပင်ခြင်ကျားနဲ့ ခြိမ့်နိုင် ကလောင်တွေ တုံးနေပြီလား?
မြန်မာ့သွေးစစ်စစ် မြိုကို စိတ်ထဲ အသဲထဲကချစ်တာကိုရွေးပါ။
ခင်ဗျားတို့လဲ အသုံးချခံ မဖြစ်ဖို့ ကလောင်စွမ်းပြပါ။
ဟာ ရှက်ကြပါအုံး အာဏာ နဲ့ ကုလားထိုင် အတွက်
ဘယ်သူမှ ခေါင်းဆောင်မလုပ်နဲ့ ငါပဲလုပ်မယ်
NLDတွေမြောက်ကြွမြောက်ကြွလုပ်နေကြပြန်ပြီဒေါစုထောင်ထဲရောက်ရင်နောက်ကလိုက်ဝင်နေရအုံမယ်သတိထား ကုလားများကြီစိုးရာပြောရရင် NLD ဟာကုလား ဗလီကြီးဖြစ်နေပါပြီ